Amadoda yiqiniso, ubulili obuqinile. Kodwa banobuthakathaka obuningi. Wonke umuntu unayo eyakhe, yebo. Nakuba kukhona abantu abavamile "izindaba ezimbi". Mhlawumbe, emva kokufunda ngabo, thina-besifazane siyobe sesibaqondisa kancane ... Noma kunjalo, ukufunda izinto ezingu-10 abantu bonke abesaba emhlabeni ngeke zilimaze owesifazane oyedwa.
KUFANELE KUFANELE UKUTHI KUNYE.
Ukunyakaza okungaqondakali kuma-boutiques abizayo kungabiza kakhulu. Ngemuva kokubuka amafasitela, kulula ukuthinta ibhodlela le-cognac yeqoqo nge-euro eyizinkulungwane ezimbalwa. Kwenzekani, yini ongayenza. Ngokweqiniso, konke okwenzekayo ekamelweni lokuhweba, kuyisitolo esithintekayo kanye nezimangalo akufanele kube. Kodwa ukuhlola lokhu ngokusebenza, ngesizathu esithile, akekho namadoda angathanda.
Kubonakala sengathi akukho lutho olwesabekayo: Ngabiza ifoni yoMnyango Wezimo Eziphuthumayo futhi ngabiza abafana ngamathuluzi okwenza isigamu sehora nama-ruble angu-3000 azovula umnyango. Kodwa abafana bahlole ukubhalisa kuqala. Futhi uma umuntu ehlala endlini eqashiwe, kuzomele ubize umnikazi. Uma kungenakufinyelela - kuhle. Uma ehamba kwamanye amazwe iminyaka embalwa, kuzomele amlinde ngaphansi komnyango. Futhi uma kunjalo ngisho nendawo yokuhlala yomngani? Futhi ngaphakathi kwakukhona izinto ezibalulekile, imibhalo kukhona ezinye, amathoyizi ezithombeni, akudingeki ukubona ... Ngokuvamile, amadoda anokwesaba okunjalo. Kuyinto engavamile, akunjalo?
Ukukhokha ikhadi kulula futhi kunenzuzo, ikakhulukazi kwamanye amazwe: ngeke kudingeke ukhokhe isithakazelo sokwenza imali. Inkinga ukuthi ikhadi liyisidalwa esibucayi. Kungaba yidemagnetized, ephukile noma ngandlela-thile ivinjelwe. Ephaketheni lakhe, umuntu ohluphekile uzobe engenalutho futhi akekho oyoyithatha. Kuyadingeka, kusobala, ukuthengisa impahla.
Enye i-adventure enhle engenzeka lapho noma kuphi. Yiqiniso, indoda ngeke iphoqeleke ukuba ichithe konke ukuphila kwayo endizeni njengeqhawe lefilimu mayelana nezinzuzo zamaNtaliyane eRussia. Kodwa hero yefilimu "Terminal", angakwazi kalula. Ikakhulukazi uma ukulahleka kwenzeka endaweni yokuhamba yezindiza e-Congo, lapho ehlose ukuhamba khona eZaire.
Hlala ngaphandle kokuxhumana.
Manje kunzima ukukhumbula ukuthi abantu baphila ngaphambi kokusungulwa komakhalekhukhwini, kodwa kukhona ukusola ukuthi kungcono kunamanje. Kodwa-ke, sekuphuthumayo ukuphuthelwa lezo zikhathi ezimangalisayo: sonke sinokuthembela okunamandla. Ukuhlwanyela ibhethri kufanelana nomdlalo womuntu siqu futhi kungasetshenziswa njengethuba lokucindezeleka okwesikhashana. Futhi kulungile uma nje engahlangabezane nentombazane. Kwenzeka ukuthi ngenxa yezinkinga ezinjalo izigidi zezivumelwano ziphukile.
FUNDA UKUPHILA KWABAKHAYA BAKHO.
Lokhu kungenzeka kungakhathaliseki ukuthi uyisidakwa noma isisindo. Nakuba okokuqala kwenzeka amathuba okuba aphezulu. Ukunakwa, wazi, ukuhlakazeka, ngaphandle kwezikhungo eziningi kuyamukelwa esikhundleni sokuqondakala kuleyo ncwadi ukuze udwebe imibiko noma izithombe. Ezindaweni eziqhubekayo kancane kancane waqala ukuhamba nomkhuba wokwehlukana kwamatayitela ngesisekelo sobulili. Futhi kulungile: kubonakala sengathi imiklamo yezingubo zangasese ku "M" ne "F" ayifani kakhulu.
Ukuhleka kwenhlamba kwabaningi kufaka esikhundleni sokuthi impilo ilahlekelwe yini: ingqondo, ubuhle kanye nempilo yomzimba. Kubantu abanjalo, into embi kakhulu engenzeka kungabi yilokho uSchnur ayevame ukuyihlabelela ngakho, kepha ukungena enkampanini yabantu abangahleki amahlaya abo. Kodwa-ke, ngokusho kokubaluleka kokuhlelwa kwe-Kant, isimo sengqondo esikuzungezile sinqunywa isimo sakho sengqondo kubo. Ngakho ukuhleka amahlaya abanye abantu, ngisho neziphukuphuku.
Amadoda avakashele iSoutheast Asia, ngokuvamile aqala ukulandisa kwabo mayelana nokuphumula ngamagama athi: "Kodwa omunye wabangane bami, yiqaphele, wasusa intombazane, kodwa kwaba yindoda". Njengomthetho, inkulumo ethi "umngane wami" ifihla umlandeli ngokwakhe - akuwona wonke umuntu onenhliziyo yokutshela ngalokhu. Eqinisweni, ukuba nesimo esinjalo endaweni ethile eThailand - kulula. Kunzima kakhulu ukunquma ukuthi yini okufanele uyenze: ngakolunye uhlangothi, imali ikhokhwa, ngakolunye ... Yilokho, kuyokwenzani ngomunye?
Ukuze uchithe amandla.
Njengoba wazi, ngisho izindonga zinezindlebe - yini esingayisho ngabantu. Ngakho-ke, uma indoda ifika nomngani ebhajini futhi izomtshela omunye umcengezi ngomphathi wakhe, uhlale eqala nxazonke. Kungenzeka ukuthi umlingisi oyinhloko endabeni yakhe uhlezi ngemuva kwakhe. Kodwa kungenjalo akufanele uphumule: mhlawumbe umnumzane etafuleni eliseduzane ungumngane omuhle womphathi wakhe. Ngakho uzokhuluma ngokuthula ngangokunokwenzeka.
FUNDA ULIMI LWAMABHUBA.
I-Russia ayiziqhenya ngomcebo wayo. Ngakho-ke, akuwona wonke umuntu ofuna ukubona igama lakhe ohlwini oludumile lwabantu abacebile kakhulu. Isizathu salokhu akusilo ukuthobeka kwemvelo kwezigidigidi zamaRussia, kodwa ukuthandwa okungase kwehle ngesimo samaphoyisa asemtela. Nokho, ukungena kuForbes kusongela da-aleko hhayi wonke umuntu ...
Yini ongayinika umyeni wakhe ngoFebhuwari 23
Iqiniso lonke ngabantu
Indoda ecebile nowesifazane ompofu
Kungani bonke abafana bezethemba ngokweqile?
Indoda ithinta kanjani owesifazane
Izibonakaliso ezingu-10 ukuthi umyeni wakho ongeke abe ngumlingani wakho
I-omelette yama-vegetarian ngaphandle kwamaqanda
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilingo ye-prenita
Iresiphi eyiphundu yekhekhe elimnandi le-vanilla-ikhofi nge ukhilimu omuncu
Amaplastiki Asondelene Amalungu Ezocansi Kwabesifazane
Ukubaluleka komdlalo ekuthuthukiseni kwengqondo yengane
Abalingani, ukuphola amadoda acebile
I-Pasta Tom Yam
Ukudla kwezinsuku eziyisihlanu
Indlela yokugqoka kahle i-mini emva kwe-30: imithetho emithathu ebalulekile
Ukuhaha kwezingane: indlela yokubhekana nayo
Ukuphulukisa izindawo ze-schungite amaminerali
Indlela yokukhulisa i-violet